Discount Furo Kurema Kwekuwedzera Kugadzira uye Fekitori | XiongHuye
Furo kuyera mumiririri chigadzirwa chedu chitsva, chisina kuchena uye chisina hunhu chigadzirwa. Ichi chigadzirwa hachina kuchena uye hachinhuhwi. Inogona kuwedzera huwandu hwakawanda hweeps furo bhodhi uye eps furo kurongedza zvigadzirwa mune polystyrene furo zvigadzirwa. Iko iko chaiko kushandiswa kwepolystyrene mbishi zvigadzirwa zvine zvakanakisa mhedzisiro mune akawanda mativi. Mushure mekunge vazhinji vagadziri vaishandisa, huremu hwekuwedzera huremu huri pachena. Chigadzirwa chacho chinewo hunhu hwemoto unodzora, husina chepfu, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kuomesa, mutengo wakaderera, uye nyore kushandisa. , Mushure mekushandisa, chigadzirwa chine hunhu hwekuregedza kwemurazvo, kuwedzera uremu, kupenya kwemavara, kupenya, uye kuomarara. Simba-rinochengetedza zvinhu zvinoshandiswa pamapombi efuro, mapakeji madiki, mahwendefa, nezvimwewo, mabhodhi emwenje anowedzera 1 kusvika 2 kilograms pa cubic mita, uye mabhodhi anorema anowedzera 3-5 kg.
EPS polystyrene furo bhodhi inorema mumiririri nyanzvi furo kuyera mumiriri mutengesi.
EPS furo bhodhi uremu mumiririri yakakamurwa kuita chidimbu mhando uye mvura mhando. Kunyanya, kwavo kuita uye kunyorera bhodhi density haina kufanana. Ivo anoshandiswa eruvara simbi sangweji mapaneru uye granular maumbirwo ekucheka maumbirwo; granular uye mvura mhando dzekunze madziro kuputira mabhodhi uye epasi kudziyisa mabhodhi anogona kushandiswa, uye ivo vanogona zvakare kusanganiswa uremu uye murazvo unodzora. Mhedzisiro yacho iri nani.
Kazhinji kutaura, rimwe bato rinogona kuwana 2-3 kg pahuremu pasina kukanganisa kutaridzika uye kunzwa kwebhodhi. Icho chinhu chakakosha chinobatsira cheEPS furo bhodhi mafekitori uye benzene bhodhi mafekitori. Izvo zvigadzirwa zvakasimudzirwa kunze kwenyika.
1.Mhedzisiro mhedzisiro inowedzera huremu
3.No ngura kuti muchina.
4.Better moto unodzora mhedzisiro.
5.No-muchetura uye kwezvakatipoteredza kuchengetedzwa.
Wedzera purofiti 150-500 $ / tani, kilogiramu imwe pachinzvimbo kilogram imwe eps mbishi.
Zvadaro: EPS mbishi zvigadzirwa